Calendar 2014 “Farm” Kalandarka - Joornaalka Naqshadeynta
Sabti 17 Bisha Todobaad 2021
Kalandarka Qalabka farshaxanka waraaqaha ee Farm waa fududahay in la isu keeno. Looma baahna koollo ama maqas. Isku soo wada uruur adiga oo ku dhejinaya qaybo isku calaamad ah. Xayawaan kasta wuxuu noqon doonaa jadwal labo bilood ah. Naqshadayaasha tayada leh waxay leeyihiin awood ay wax kaga beddelaan boos oo ay u beddelaan maskaxda isticmaaleyaasheeda. Waxay bixiyaan raaxo aragtida, haysashada iyo adeegsiga. Waxay lafiican yihiin iftiin iyo shey la yaab leh, oo kobcinaya boos. Alaabtayada asalka ah waxaa loo habeeyay iyadoo la adeegsanayo fikradda Nolosha ee leh Naqshadda.
Magaca mashruuca : Calendar 2014 “Farm”, Magaca naqshadeeyayaasha : Katsumi Tamura, Magaca macmiilka : good morning inc..
Khamiis 15 Bisha Todobaad 2021
Kalandarka Katsumi Tamura Calendar 2014 “Farm”